အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: ကြွ...ကြွာ...ကြွား...
khin oo may June 28, 2010 at 5:17 AM
အားရပါးရကြွားထားတာတွေ အားရပါးရရှူစားသွားပါကြောင်း. သားလေးကိုတော့စိတ်ဝင်စားသား..
အန်တီချမ်း June 28, 2010 at 5:31 AM
လာမယ် မမကွမ် လာမယ်
အရင်က သူတို့ က ဒီက အမေရိကန်ကျောင်းတခုမှာ
Rita June 28, 2010 at 8:07 AM
စားတာတွေဆို နည်းနည်း ကျော်ဖတ်သွားတယ်။
အစားကို တော်တော်ကို စိတ်မဝင်စားတာ။
အန်တီချမ်း June 28, 2010 at 8:30 AM
ပိန်တော့ မော်ဒယ်နဲ့တူတာပေါ့ မမရီတာ
အဲ့တာကြောင့် ဘလောခ် မှာ ပုံလှလှလေးတွေ တင်နိုင်တာ
တို့များတော့ ဝနေလို့ မျက်နှာတောင် မတင်ရဲရဲ တင်ရဲရဲ တင်နေရတာ
Mon Petit Avatar June 28, 2010 at 8:50 AM
Give 22" to whoever wanted most, chicken quesadillas, one of my fav, and I do parceled up if I can't eat them all. I also like that small suitcase.
may June 28, 2010 at 9:11 AM
တီချမ်းတို့ များ ကြွားစရာတွေ တပုံကြီးပဲ
လက်ဆောင်ပေးတဲ့ အိတ်ကလေး သဘောကျတာအေ
ရန်ကုန် ဘယ်အချိန်က ပြန်လိုက်တာလဲ ဒါကြောင့် ဟိုတလောက ပျောက်နေတာကိုး
ဒီကဖြင့် အနီတွေဖမ်းတဲ့ထဲများ ပါသွားသလားလို့အဟိ
Vista June 28, 2010 at 9:13 AM
၄၂ လက်မfull HD ထပ်ဝယ်ပါ သိသိသာသာကွဲပြားတာသိလိမ့်မယ်ဟိ။
အန်တီချမ်း June 28, 2010 at 9:17 AM
ဟုတ်တယ်လေ မေရဲ့ အရင်တပတ်က ပြန်သွားတာ မောင်နဲ့ ၅ နှစ်ပြည့်မှာ တူတူရှိချင်လို့
တီလဲ အမှန်ပြောရရင် အိတ်ကိုကြိုက်လို့ဝယ်လိုက်တာပဲ ရူးတာရူးတာ
မပြောချင်ဘူး ပြောကိုမပြောချင်ဘူး လို့ပဲ ပြောလိုက်ချင်တော့တယ်
မနေ့က ပန်တစ်မှာ နေ့လည်က အဲ့ဒီ ၃၂ လက်မ ကိုဝယ်တယ်နော်
ညကျတော့ အမ်ပိုရီယမ် မှာ ၄၂ လက်မ တံဆိပ် တူတူက ဘတ် ၁၀၀၀၀ လျော့တယ်
ရောင်းဈေးက ၃၉၉၉၀ ကို ၁သောင်းကျော်ကျော်လေးလျော့တော့ ၂၈၉၀၀ လားမသိဘူး
ဝယ်ချင်လိုက်တာ လက်ကို ယားသွားတာပဲ
i want it but i DON'T need it
အိပ်ခန်းထဲက တီဗီ တင်တာက မဆန့်တော့ဘူး
ဖိုးစိန် June 28, 2010 at 10:08 AM
ဖိုးစိန် June 28, 2010 at 10:23 AM
အင်း.. လူတွေ ခက်တယ်
ခုမှ မြင်ဖူး၊ တွေ့ဖူးတော့လဲ လိုချင်ရှာမှာပေါ့။
ကိုယ်တွေ ဒါမျိုးတွေ မလိုချင်လို့ ဟိုမှာထားခဲ့တာ ထုနဲ့ဒေး
သုံးဖူးပြီးသားပစ္စည်းတွေ၊ စားဖူးပြီးသား အစားအသောက်မျိုးတွေကို ထပ်တလဲလဲ မြင်ရတော့ သရေမကျတဲ့အပြင် စိတ်ကုန်သလိုလို စိတ်ပျက်သလိုလိုပါပဲလား။ ကိုယ့်အကြိုက်ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ ဈေးကြီးတဲ့ ပစ္စည်းတွေ မထွက်သေးပါလားလို့။ အဟတ်
အန်တီချမ်း June 28, 2010 at 10:29 AM
ဖိုးစိန် June 28, 2010 at 10:30 AM
အန်တီချမ်း June 28, 2010 at 10:37 AM
Vista June 28, 2010 at 12:35 PM
Leo June 28, 2010 at 7:03 PM
တီ့ရဲ့ TV ကိုကြည့်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကို တီပြောသလိုပဲ I don't need it, my room is so small လို့ အထပ်ထပ်ပြောပြီး ပြန်သွားပါတယ်။
အန်တီချမ်း June 28, 2010 at 7:56 PM
ဘီယာတွေ စိတ်ညစ်တယ်ဆိုပြီး ဇွတ်သောက်မနေနဲ့နော်
ချစ်ကြည်အေး June 28, 2010 at 8:30 PM
ဟားဟား ဖတ်ရတာ ပျော်စရာ...တီရေ...ပွင့်လင်းတာကို သဘောကျတယ်....ရေးဟန်သွက်တာကိုလည်း ကြိုက်တယ် လင့်ခ်ယူသွားတယ်နော်...:)
sweetpeony June 29, 2010 at 12:17 PM
ပစ်စရာ နေရာမရှိရင် ဒီဘက်ပစ်လိုက်ပါ.. စိတ်မဆိုးဘူး အဟုတ်...
Leo July 1, 2010 at 10:46 AM
Mon Petit Avatar July 1, 2010 at 5:08 PM
Though I am not inaposition to say that, I want to request youapost with the pictures from northern part of Thailand, when you are not busy, of course, and waiting for Mandalay trip post too.
thet July 4, 2010 at 10:39 AM
ကျွန်မ က တီချမ်းဘလော့ ကို ဖတ်မိတာ မကြာသေးပါဘူး။ပေါ့ ပေါ့ ပါးပါးလေးတွေနဲ့ပွင့် လင်း စွာရေးထားတာလေးတွေ ကို သဘောကျ တယ်။ နောက်လဲ များများရေးပါ။ လာအားပေးပါ့ မယ်။
khin oo may July 4, 2010 at 10:14 PM
Mon Petit Avatar July 8, 2010 at 12:20 AM
Mae Sot? I have never been there. In fact, there isalot of places I haven't been even in BKK. Hoping to readapost related to Mae Sot, and forgive me for bugging you again and again.